स्वरोजगार लघुवित्तको बोनस समायोजन, समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » स्वरोजगार लघुवित्तको बोनस समायोजन, समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौं - स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको १६.६६% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । सोमबार बोनस सेयर समायोजनपनि कम्पनीको सेयर भाउ प्रतिकित्ता १८ सय ३० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसआधारमा सोमबार स्वरोजगारको कारोबर १८ सय ३० रुपैयाँमा खुल्दैछ ।
यसको औसत आधार मूल्य भने १७ सय ९८ रुपैयाँ छ । कम्पनीले कात्तिक ११ गते वार्षिक साधारण सभा गर्न सोमबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो । सभामा १६.६६% बोनस सेयर र ०.८९% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साधारणा सभा सी डब्ल्यू रेष्टुरेन्ट, कमलादी, काठमाडौंमा कात्तिक ११ गते बिहान ११.३० बजे सुरु हुनेछ । स्वरोजगारले सभामा बोनस सेयरपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीमा १००% हकप्रद ल्याउने अर्को विशेष प्रस्ताव पनि पेस गर्दैछ । चौथो त्रैमासमा स्वरोजगारले २ करोड ८६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ ९१ पैसा (वार्षिक) रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १६६ रुपैयाँ ९ पैसा छ ।